Industry News Manufacturers - Abathengisi China Industry News & Factory
Impahla eshushu yombane luhlobo lwempahla enokuvelisa ubushushu kunye nobushushu ngokusebenzayo. Umgaqo-siseko kukudibanisa unikezelo lwamandla, isixhobo esilawula ubushushu, isixhobo sokukhusela ukhuseleko kunye nezinto zokufudumeza iingcingo ukwenza isekethe, kwaye sisebenzise umbane ukulawula ukufudumeza kombane ...
Kutheni ukhetha i-Eleheat yomenzi wephedi yokufudumeza?
Imozulu ngokuthe ngcembe ijika ibande, iimpahla eziphambili zeempahla sele zisungule iimpahla ezintsha zasekwindla nezasebusika. Ngeli xesha, lixesha elishushu leshushu. Nangona kunjalo, kukho abavelisi abaninzi be heater kolu shishino, kutheni ukhetha i-Southern Sparkle Wearable Technology Co, Ltd? 1 ....
Impahla efanelekileyo, kufuneka ithathele ingqalelo uyilo lokhuselo lwempahla
Impahla ibalulekile kuye wonke umntu. Impahla iye yaba lulusu lwesibini lomzimba womntu kwasekuqaleni ukuya ekuhombiseni nasekuzikhuseleni. Ukhuseleko lwempahla kufuneka luqwalaselwe. Uyilo lokhuselo lwempahla yenye yeendlela zophuhliso lwethiyori yoyilo lwefashoni yanamhlanje. Ukuphuhliswa kwe ...
Iphedi yokufudumeza, Yenza ulonwabo lwakho lufikeleleke
Iphedi yokufudumeza isetyenziswa ikakhulu njengesixhobo sokufudumeza kwimpahla yokufudumeza ekrelekrele ngoku. Ngaphandle koko, ngenxa yokuthamba kunye nokuqhubekeka, iphedi yokufudumeza inokusetyenziswa kwiimveliso zekhaya, iimveliso zomzimba kunye nabanye. Logama uyilo lusengqiqweni, yonke into inokwenzeka. Xa ubushushu ...
Yintoni izambatho smart
Yintoni impahla efanelekileyo? Kule mihla, lixesha lobukrelekrele. Iifowuni ezi-Smart, amakhaya akrelekrele, iimoto ezikrelekrele, imfundo enobukrelekrele ingene ebomini bethu, kwaye iimpahla ezintle kukwaphonononga ixesha elikrelekrele. Ke, yintoni impahla efanelekileyo? Izambatho ze-Smart yindibaniselwano o ...
Kwisiqingatha sokuqala sonyaka, ixabiso elongeziweyo lemveliso yokuthintela ubhubhane yonyuke nge-57,8%
Ukusuka kuJanuwari ukuya kuJuni, ixabiso loshishini elongeziweyo lamashishini angaphezulu komgangatho obekiweyo kwishishini leendwangu laseTshayina lehle nge-6.7% ngonyaka, ngonyaka, encitshiswa ngamanqaku epesenti ayi-9.8 xa kuthelekiswa nekota yokuqala. Umzi mveliso wokuhanjwa kwamachiza waqhutywa ngumjikelo ...
Intatheli ityhila 'imfihlo' kwisisombululo sasemoyeni ekusebenzeni ingxaki ishiya ababukeli bothukile
Intatheli ye-Channel 10 ishiye ababukeli bemangele emva kokuveza iinkcukacha ezifihliweyo emnqamlezweni wakhe ongaphilanga mntu. Intatheli ye-TV yase-Australia ityhile indlela “eyimfihlo” yokusombulula ingxaki enkulu yomsebenzi. Intatheli ye-Channel 10 u-Kristina Costalos wabelane ngevidiyo kwi-TikTok exoxa nge-cha ...
Ukufudumeza Umkhosi we-COO uGregory Thomas uvala ukuDityaniswa kwezigidi eziDola nge-California Ngokusekwe kobuso basemaNtla
Nge-27 kaJulayi nge-20 ka-2020 uGreg Thomas, iGosa eliSebenzayo le-Heor Armenti lihlasele isivumelwano esaphula isivumelwano neCarlifonia esekwe kubuso basenyakatho. I-Heated Armor yintambo yokugqoka esekwe kwiColorado ekhethekileyo kwiingubo zokunxiba kunye nezemidlalo. Ukuba uyinkampu, skier, phila ngokubandayo ...
Iingcebiso zendlela yokubetha ubushushu
Abantu bathwaxwa kanobom ngeentsuku zezinja, nazi ezinye iingcebiso zokuba ulungiselele ubushushu obugqithisileyo: o Kulumkele umsebenzi onzima. Musa ukuzama ukwenza kakhulu ngomhla oshushu. o Sela amanzi amaninzi; nokuba awuziva unxaniwe. Khusela iziselo ezinxilisayo kunye neziselo ezineswekile eninzi okanye icaffeine. Ukuba ugqirha wakho ...
Jacket shushu, 12v iingxoxo ezitshisayo zebanga Car Seat ababetheki, iingxoxo ezitshisayo zebanga Insoles zitshajwe , ibhulukwe shushu, 'uthuli Vest, Cotton Thermal Underwear ,